शिक्षा सेवा प्राविधिक सहायक पाँचौ समुहको पाठ्यक्रममा के छ ? -शिक्षा सेवा प्राविधिक सहायक पाँचौ समुहको पाठ्यक्रममा के छ ? -
२४ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १४:०४ मा प्रकाशित
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले हालै ९ हजारभन्दा बढी स्थानीय तहका लागि कर्मचारी माग गरेको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहको आवश्यकता र मागको आधारमा लोकसेवाले विज्ञापन गरेको हो । विज्ञापनअनुसार विभिन्न पदमा ३ असारसम्म दरखास्त दिन सक्नेछ । डबल दस्तुरका साथ १० असारसम्ममा दखास्त दिन सक्नेछ ।
अन्यजस्तै लोकसेवाले स्थानीय तह अन्तर्गतका प्राविधिक तर्फ शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समुह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदमा पनि सयौँ कर्मचारी माग गरेको छ ।
सोही प्रतियोगिताको परिक्षामा आधारित पाठ्यक्रम निम्न छ ।